भारतको सहयोगमा ओली सरकारले दियो मधेशी मोर्चालाई ३ धोका
पहिलो धोका सविधान संशोधनबाट भएको छ । दोस्रो धोका मन्त्रीपरिषद्बाट तीन बुँदे प्रस्ताव पारित गरेर भएको छ भने तेस्रो धोका राजनीतिक संयन्त्र बनाएर । ..... विभिन्न चरणको औपचारिक वार्ता मात्र तीन दर्जनभन्दा बढी पटक भइसकेका छन । तर, हालसम्म कुनै पनि मुद्दामा सहमति हुन सकेको छैन । ...... मधेशी मोर्चाका एक घटक सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले आफुहरु केही गर्न नसक्ने अबस्थामा रहेको बताए । ‘हामीले के नै गर्न सक्छौँ, न हामीसँग बन्दुक छ, न त लाठी नै छ । उनीहरु (तीन दल) दलले जवर्जस्ती गर्यो भने हामी के गरौ ?’ उनले भने । - ....... ६ महिनासम्म आन्दोलन गरेका, ६० जनाभन्दा बढीलाई सहादत दिन लगाएका मधेशी मोर्चाको हातमा अहिले केही पनि छैन । ..... अन्ततः बहुमतको आधारमा आसोज ३ गते मधेशी दलकै विना नयाँ सविधान घोषणा भयो । त्यसको अवसरमा राजधानीमा दिपावली भयो भने मधेशमा ब्ल्याक आउट ।
फेरि नाकाबन्दी गर्ने मधेसी मोर्चाको चेतावनी
संविधान हामीलाई उपेक्षा गरेर ल्याईयो, संसोधन पनि त्यसरी नै ल्याईयो, सीमांकनकोलागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि सरकारले एकतर्फी रुपमा गठन गर्यो । यस्तै रबैया जारी रहे संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठक बसेर शसक्त आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउँछौ ।’ ..... उनले सरकारले सहमति विपरित अहिले पनि गिरफ्तारी र झुठा मुद्दा लगाउने काम नरोकेको प्रति आक्रोस ब्यक्त गर्दै अहिले मौसमको प्रतिकुलताले आन्दोलनको स्वरुप बदलेको भए पनि केही दिनमा बसेर शसक्त आन्दोलन लिएर आउने जानकारी दिए । ठाकुरले सरकारले आफूहरुको सहमति बेगर गठन भएको राजनीतिक संयन्त्र अस्विकार्य भएको भन्दै संयन्त्रलाई संबैधानिक मान्यता दिने र आफूहरुले उठाएको कुरा कार्यविधीमा समेटे संयन्त्रमा सहभागि हुने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘ संयन्त्रलाई संबैधानिक हैसियत दिएर आफूहरुले उठाएका सरोकारलाई कार्यविधीमा समेटे यही संयन्त्रमा सामेल हुन हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।’
अबको आन्दोलन राजधानी केन्द्रित : उपेन्द्र यादव
थाहा छ बदाम खानुका फाइदाहरु
बदामलाइ कुनै पनि व्यञ्जनमा राख्नाले त्यसको स्वादमा भरपूर वृद्धि हुन्छ ।
नाका खोलेर के अपराध गरेँ ?
संविधानसभाबाट जारी संविधानले मधेसमा विद्यमान विभेदको अन्त्य गर्न असमर्थ देखियो । त्यसैले हामीले पहिलो चरणमा ४० दिनसम्म मधेसकेन्द्रीत आन्दोलन गर्यौं । मधेसी जनता आफ्नो अधिकारको लागि पेट खाली राखेर भए पनि आन्दोलनमा उत्रिए । त्यो अवधिभर मधेस ठप्प रह्यो, जनजीवन प्रभावित बन्यो । तर, त्यहाँको आवाज कहिल्यै सिंहदरवारले सुनेन । ....... यो बाध्यात्मक आन्दोलनको एउटै उद्देश्य थियो कि कानमा तेल हालेर बसेको सिंहदरबारले अधिकारका लागि लडिरहेका मधेसी जनताको आवाज सुनोस् र यथाशीघ्र समस्याको समाधान गरोस् । यस प्रकारको आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी जनतामा नै असर पर्छ भन्ने जान्दा–जान्दै पनि हामी यस्तो अप्रिय र कठोर निर्णय लिन बाध्य भएका थियौं । किनभने हाम्रो अपेक्षा थियो– आपूर्ति व्यवस्था असहज भएपछि सरकारमाथि जनताको दवाब बढ्नेछ । त्यसपछि वार्ता र संवादको माध्यमबाट मधेसी जनताको माग राज्यले सम्बोधन गर्नेछ । ...... वीरगञ्ज नाकाबाहेक अन्य नाकाहरू ठप्प हुन सकेन । ..... सीमा अवरोधको बहानामा कालोबजारी मौलायो । उता, सरकारले पनि जनतालाई खोक्रो राष्ट्रवादको अफिम खुवाएर दिग्भ्रमित बनाइराख्यो । मधेसी जनताले अधिकारका लागि होइन, मधेस टुक्राउनका लागि मात्र आन्दोलन गरिरहेका छन्, भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्यो, हामी झुक्नुहुँदैन जस्ता आसयका प्रचारबाजी गरियो । ...... जुन प्रयोजनका लागि सीमाअवरोधसहितको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याइएका थिए, ती असफलजस्तै देखिए । दुःख सरकारलाई दिन खोजेको, जनतालाई मात्र पर्यो । त्यही भएर जनताबाट दवाब आयो– कि सरकारलाई सबै नाका बन्द गरेर दवाब देऊ नत्र कालाबजारीलाई पोस्न मात्र एउटा नाका बन्द नगर । ...... ६–७ महिना लामो आन्दोलनको स्वरूप विभिन्न चरणमा विभिन्न हुन्छ । एउटै तरिकाको मात्र आन्दोलन भयो भने आन्दोलन ‘फेजआउट’ हुन्छ । यो आन्दोलनको सिद्धान्त नै हो । मोर्चाभित्र सबैको मानसिकता अब आन्दोलनको स्वरूप परिर्वत गर्नुपर्छ भन्ने नै थियो । तर, निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । ....... त्यसपछि मैले पनि अब जनतालाई मात्र धेरै दुःख दिनुहुँदैन भनेर मोर्चाको बैठक हुनुभन्दा एक दिनअघि विराटनगरमा गएर आन्दोलनको स्वरूप परिर्वतन गर्ने विषयमा प्रस्ताव आफँै लैजान्छु भनेर बोलेँ । किनभने नाकाबन्दीका लागि सबैभन्दा धेरै खट्ने म नै थिएँ । यसमा सबैभन्दा धेरै दवाब ममाथि नै थियो किनभने सबैले यसको दोष मलाई नै दिइराखेका थिए । मैले विराटनगरमा बोलेको मात्र के थिएँ, जनताले भोलिपल्टै वीरगञ्जमा आफैँ गएर नाका खोलिहाले । नाका सहज भइहाल्यो । ....... हाम्रो मानसिकता पनि आन्दोलन परिवर्तन गर्ने बनिसकेको थियो । जनताले पनि त्यही अनुसार नाका खोलिदिए । यसमा जनतालाई धन्यवाद दिएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, मोर्चाका साथीहरूले राजेन्द्र महतोले नाका खोल्यो भनेर गाली गर्न थाले । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तनको विषयमा मोर्चाका अन्य साथीहरू पनि बोलेकै थिए, मैले पनि बोलेँ । के अनर्थ गरेँ र मैले ? ....... उहाँहरूले बोल्दा खुलेन, मैले बोल्दा फ्याट्टै खुल्यो । यस्तो किन भयो भने नाकाबन्दी गर्न सबैभन्दा बढी म नै खटेको थिएँ । अन्य नेता काठमाडौंमा हुँदा म मधेसमा थिएँ । त्यसमाथि बन्द भएको एउटै नाका मेरो नेतृत्वमा थियो । मैले बोल्ने बित्तिकै उक्त नाकामा असर पर्नु स्वभाविक नै हो । ...... नाकाबन्दी खुल्नुमा दिल्ली र बिहार भ्रमणको कुनै भूमिका छैन । किनभने आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने कुरा त दसैंपछि देखिनै सुरु भएको हो ।
नाकाबन्दीको कार्यक्रम एक महिनाभन्दा बढी चल्नुहुँदैनथ्यो । त्यति अवधिमा नै वार कि पार हुनुपथ्र्यो । सबै नाका एक महिनामात्र ठप्प भएको भए सरकार घुँडा टेकिहाल्थ्यो ।
..... मिडियामा प्रचारबाजी भएजस्तो मोर्चाभित्र कुनै टकराव छैन । ..... ६ महिनासम्म मधेसमा खटेर आन्दोलनलाई अघि बढाएँ । अहिले काठमाडौंमा बस्नेले ‘चोर बोले जोर से’ भन्ने जस्तै मलाई माफी माग्नुपर्ने भनेपछि मैले निर्णयमा सही गरिनँ । ...... मोर्चाको बैठकमा पनि साथीहरूले कुरा राख्नुभयो, ‘मधेस आन्दोलनको जस सबै तपाईंले मात्र लिनुभयो ।’ तर, जस भन्ने कसैले लिएर लिने कुरा होइन । त्यो कसैले गरेको कामको आधारमा जनताले मूल्यांकन र समीक्षा गरेर दिने हो । राजेन्द्र महतोको ‘हाइट’ बढ्यो भन्ने कुरा छ, त्यो उसै बढेको होइन, जनताले बढाइदिएको हो । पहिलो मधेस आन्दोलनमा पनि उपेन्द्र यादवजीको हाइट बढेकै हो नि । आन्दोलनमा जसले काम गर्छ, जनताले त्यही आधारमा नम्बर दिन्छन् । ......... मधेसमा हतियार उठ्यो भने त्यो मधेसमा मात्र सीमित रहँदैन । त्यो भारत पनि पस्न सक्छ । मधेसको अस्थिरतामा फाइदा उठाउँदै भारतविरोधीहरूले त्यहाँ खेल्न सक्छन् भनेर उसले सधँै मधेसप्रति चासो व्यक्त गरिरहेको हुन्छ । त्यही भएर भारतले मधेसको समस्या समाधान गर्नका लागि चिन्ता व्यक्त गरेको हो । ...... विभेद र रंगभेदको आन्दोलनमा भारतीयहरूले जहिले पनि साथ दिएको इतिहास छ ।
गान्धीजी दक्षिण अफ्रिाकासम्म पुगेर लड्नुभएको थियो । नेपालमा पनि त्यही प्रकृतिको आन्दोलन हो ।
सीमित खसबादी संकीर्ण सोच भएकाहरू, जो मधेसी, जनजाति, आदिवासी, थारूलगायतलाई अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने छन्, उनीहरू विरुद्धको आन्दोलन हो । नश्लवादी सोच र चिन्तनविरुद्धको आन्दोलन हो यो । ....... जनता आन्दोलनमा हुँदा भारतले जहिले पनि साथ दिएको छ । राजा त्रिभुवन पनि जनताको लागि लड्दा भारतले साथ दिएको थियो । ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि साथ दिएको थियो,
०६२/६३ मा साथ दिएकै हो । त्यतिबेलाका आन्दोलनकारीहरूले भारतसँग नाकाबन्दी गर्न आग्रह गरेको थियो । गिरिजाबाबुले आफैँ नाकाबन्दीको कुरा राख्नुभएको थियो । आज हामीले नाकाबन्दी गर्दा कसरी राष्ट्रघाती भयौँ ?
...... हामीले पहिलो मधेस आन्दोलनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला भारतले भूमिका खेलेको थियो । तर, अहिले त्यो सम्झौता लागू भएन । त्यही भएर हामीले भारतलाई सोधेका हौं, ‘तिमीले सम्झौता लागू गराएको खै ?’ ......
हामीले परिस्थिति सहज बनाइदिएका छौं । त्यही भएर केपी ओलीजीलाई मेरो सुझाव के छ भने यसको भरपूर फाइदा उठाउनुहोस् समस्या समाधानका लागि । अब पनि समस्या समाधान नभए हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । चैत–बैशाखमा घनघोर आन्दोलन गर्छौं ।
...... हामीले मागेको भनेको हामीसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र अन्तरिम संविधानमा राखिएका तर नयाँ संविधानमा हटाइएका विषयहरू पुनः राख्ने हो । नयाँ केही पनि होइन । ...... आन्दोलन कुनै पदसँग साटिनेवाला छैन । २०६२/६३ को पुनरावृत्ति यहाँ हुँदैन । त्यो गल्ती यहाँ दोहोरिँदैन । मधेस आन्दोलन र सत्ताको कुनै सरोकार छैन । सत्ताको खेलमा मोर्चा लाग्ने वाला छैन । ..... अहिले संसद्मा रहेका मधेसवादी शक्तिहरु एकीकिृत भएका छौं, अन्य मधेसवादी शक्तिहरुलाई पनि मिलाएर एउटा महागठबन्धन बनाएर अन्तिम लडाईं लड्ने छौं । ....... यो आन्दोलन देश टुक्राउनका लागि होइन, देशका सबैजनताले समान अधिकार पाओस् भनेर हो ...... हामीले खसवादी मानसिकता भनेर सबै बाहुन या क्षेत्रीलाई गाली गरेका होइनौं । देशको नीति निर्माण तहमा बसेर त्यस्ता सोच राख्ने सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्र भनेका हौं । हामीले नश्लवादलाई बढाउन होइन त्यसलाई अन्त्य गर्न चाहेका हौं । ...... मधेसी जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी न हारेका छौं न थाकेका छौं । हामी अन्तिम लडाईंको तयारीमा छौं । यदी सरकारले यो सही समयको उपयोग गर्न सकेन भने तपाईंहरु निर्णायक आन्दोलनका लागि तयार रहनुहोला ।
१३ औं महाधिबेशन कांग्रेसले यसरी खर्चिदैछ ४ करोड (खानपिनको मेन्युसहित)
भोजन खर्चमा १ करोड १ लाख, आवास खर्चमा ६४ लाख, प्रचार प्रसारमा ४५लाख, निर्वाचनमा ५०लाख, झोला खर्चमा १६ लाख, छपाइ तथा स्टेशनी खर्चमा २०लाख, यायतायत खर्चमा १०लाख, कार्यक्रम खर्चमा ३५लाख, सुरक्षा खर्चमा ३०लाख, पानी खर्चमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको छ । यसैगरी धन्याबाद कार्यत्रम खर्चमा ५लाख रुपैयाँ समितिले छुट्टयाएको छ। ..... कांग्रेसले १३औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूलाई खसीको मासु र माछासहितको भोजन गराउने भएको छ । कांग्रेसले महाधिवेशन अवधिभर ८ छाक खशी र कुखुराको मासु तथा माछा भात खुवाउने निर्णय गरेको हो । ........ महाधिबेशन प्रतिनिधिहरुले खाजामा विहान र बेलुका चिया र कुकिज खाने छन । प्रतिनिधिहरु समान्यता एउटा कोठमा दुइ जना बस्नेछ । कु्नै कुनै कोठमा ३ जनालाई समेत बसाउने तयारी गरिएको समितिका सदस्यहरु बताउछन ।
संघीय न्यायपालिकाको खाका पारित
Optics and quality of welcome high. But message from India to Nepal very strong. Note: Oli said misunderstandings...
Posted by Anil Kumar Jha on Friday, February 19, 2016
Posted by Vijay Kumar Singh on Friday, February 19, 2016
दिल्लीमा पक्राउ परेका मधेशी–थारुहरुको रिहाईको माग गर्दै मधेशका जिल्लाहरुमा प्रदर्शन सुरु भएको छ।दिल्लीमा नेपालका प्रधा...
Posted by Lokendra Yadav on Saturday, February 20, 2016
यो लेख कुन इतिहास पढ़ेर लेखिएको हो त्यो थाहा छैन , तर मनोमस्तिष्क मा पहाड़ी अहंकार , भारत बिरोधी भावना र मधेश प्रति घृणा अ...
Posted by Lokendra Yadav on Friday, February 19, 2016
जनकपुर में ओली और गृहमंत्री का पुतला दहन